Lavon’ity farany tamin’ny isa nazava 2-0 ry zareo handeha ho any amin’ny lalaon’ny nosy ho tontosaina any Maurice. Hita ho nanampiniavana kokoa hitady ny lalan’ny harato tamin’io fihaonanan’ny roa tonta io. Mbola miezaka hatrany hampirindra ny fiaraha-mientan’ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa tarihany avy i Roro Rakotondrabe sy Franclin Franklin Andriamanarivo . Nialohan’io fihaonana ny tolakandro io dia nitsidika nanara-maso ifotony ny fizotran’ny fampivondronana ataon’ireo BAREA roa ireol teny amin’ny foibe fanofanana tanora t eny Carion ny filoha lefitry ny Comté de Normalisation FMF, Atoa Andriatinarivelo José. Fantatra fa mbola hifandimby hatrany amin’ny fampiasana ny kianjan’i Mahamasina hanohizan’izy ireo tsirairay avy ny roa tonta ka anio alatsinainy 14 jolay 2019 dia anjaran’ny Barea JIOI no mikotrana maraina etsy Mahamasina ary ny tolakanro kosa dia anjaran’ny Barea Chan kosa no mpiasa ny kianjan’i Mahamasiina.